बेलायती दरबार छिर्न लागेकी मेगनले... :: भानुभक्त :: Setopati
बेलायती दरबार छिर्न लागेकी मेगनले नागरिकता परीक्षा पास गर्लिन्?
द न्यूयोर्क टाइम्स लन्डन
सन् १२८४ मा रुड्लानको मूर्ति स्थापना गरिनुको आधार के? भिन्डोलान्दा भनेको के हो? राष्ट्रिय घोडचडी संग्रहालय कहाँ पर्छ? बेलायतमा छिमेकीहरूको झगडा हुने दुइटा प्रमुख कारण के हुन्?
यी केही यस्ता प्रश्न हुन्, जुन बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका नाति राजकुमार ह्यारीसँग बिहे गरेर दरबार छिर्न आँटेकी मेगन मार्कलले जवाफ दिनुपर्नेछ।
ह्यारीसँग बिहेबारीपछि बेलायती नागरिकता लिनुअघि अमेरिकी अभिनेत्री मेगनलाई यी प्रश्न सोधिनेछन्। अधिकांश बेलायती नागरिकलाई नै यसको जवाफ दिन कठिन छ। धेरैजसो प्रश्नको जवाफ बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नहुन सक्छ।
अमेरिकाको लस एन्जल्समा हुर्केबढेकी मेगनले ह्यारीसँग बिहेपछि बेलायती नागरिकता लिन खोजेको केन्सिङ्टन दरबारले जनाएको छ। यसका लागि मार्कलले लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्नेछ।
नागरिकता परीक्षा त्यसैमध्ये एक हो।
उक्त परीक्षामा भाग लिन ६५ डलर तिर्नुपर्छ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न यति कठिन हुन्छन्, कुल आवेदकमध्ये एकतिहाइदेखि आधासम्म फेल हुने गरेका छन्।
मेगनका लागि उक्त परीक्षा पास गरेर बेलायतको नागरिकता लिनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण भएको बेलायती अखबारहरूले लेखेका छन्।
‘बेलायतमा नागरिक अधिकारबारे सोधिने १५ वटा प्रश्नमध्ये मेगनले बढीमा चारवटाको सही जवाफ दिन सक्नेछिन्,’ बेलायती ट्याब्लोइड ‘द मिरर’ ले लेखेको छ।
परीक्षामा बेलायतको नागरिक अधिकारदेखि भूगोल, इतिहास र संस्कृतिका प्रश्न सोधिन्छन्। यति मात्र होइन, कुन चिजलाई बेलायतको रैथाने अंग्रेजीमा के भनिन्छ र कुन शब्द बेलायती लवजमा कसरी बोलिन्छ भन्नेसम्म परीक्षार्थीले थाहा पाउनुपर्छ।
‘बेलायतमा ‘साइडवाक’ लाई के भनिन्छ भन्ने मेगनलाई थाहा नहुनसक्छ, ’ मिररले लेखेको छ, ‘त्यसलाई बेलायतमा ‘पेभमेन्ट’ भनिन्छ।’
नागरिकता परीक्षा अवधि ४५ मिनेटको हुनेछ। परीक्षार्थीले बेलायती परम्परा, संस्कृति र इतिहासबारे २४ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। यी प्रश्न गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने बेलायतको आधिकारिक हातेपुस्तकमा आधारित हुनेछन्।
बेलायती सांसद जुलियन नाइट नागरिकता परीक्षा ‘अत्यन्तै कठिन’ भएको बताउँछन्। नागरिकता परीक्षासम्बन्धी पुस्तकसमेत लेखेका जुलियनले भने, ‘हाम्रो इतिहास नै लामो छ। इतिहासका सबै विषय, व्यक्ति र क्षेत्रमा पारंगत भएर परीक्षा पास गर्नु साँच्चै कठिन छ।’
मेगन स्वयंले पनि यो स्वीकार गरेकी छन्। उनले आफ्नो भावी देश र बेलायती राजपरिवारबारे धेरै कम जानकारी भएको बताएकी छन्।
बिहेको कुरा छिनेलगत्तै पहिलो अन्तर्वार्तामा मेगनले राजकुमार ह्यारीसँग भेट हुनुअघि बेलायतको राजपरिवारबारे पूरै अनभिज्ञ रहेको बताएकी थिइन्। एक जना साथीको माध्यमबाट ह्यारीसँग परिचय भएको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘मैले उनका बारेमा एउटा मात्र प्रश्न साथीलाई सोधेकी थिए, ‘के यी मान्छे असल छन्?’
बेलायती नागरिकता लिन हरेकले यो परीक्षा पास गर्नु अनिवार्य छ। त्यसमाथि कोही पनि सिधै परीक्षा दिन योग्य हुँदैन। ऊ बेलायतमा लगातार पाँच वर्ष बसेको हुनुपर्छ। परीक्षामा आवेदन दिन सुरुमै १ हजार २ सय पाउन्ड तिर्नुपर्छ। मेगनलाई यो रकम कति हो भन्न डलरमै बदल्दा सजिलो हुनेछ, जुन १ हजार ६ सय डलर हुन्छ।
केन्सिङटन दरबारका प्रवक्ताका अनुसार मेगनले बेलायतीसँग बिहे गरेर आउने अरू अमेरिकीले नागरिकता लिन जुन प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ, आफू पनि त्यही प्रक्रिया पछ्याउने बताएकी छन्।
मेगनका कारण मात्र होइन, पछिल्लो समय युरोपेली युनियन (इयू) बाट बाहिरिने निर्णयले पनि बेलायतको नागरिकता परीक्षाबारे धेरैको चासो छ। आप्रवासीहरूको बढ्दो प्रवेशले बेलायतको संस्कृति धमिलिँदै गएको भन्दै युरोपेली युनियन छाड्ने र आप्रवासीको बसोबासमा कडा नीति लिनुपर्ने पक्ष हाबी हुँदै गएको हो। यही लहरबीच भएको जनमत संग्रहमा बहुसंख्यक जनता इयूबाट बाहिरिने प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए।
जनमत संग्रहको नतिजा आएको १८ महिना अवधिमा नागरिकता परीक्षालाई लिएर पनि यहाँ दुईथरी धारणा सुनिन्छ। आप्रवासीहरूको प्रवेश रोक्न यो परीक्षा अझ कडा हुनुपर्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्काथरी बेलायतीहरू नागरिकता परीक्षा अत्यन्तै जटिल भएको बताउँछन्।
बेलायती नागरिकमाझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा अधिकांशले नागरिकता परीक्षामा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ दिन सकेनन्।
‘भिन्डोलान्दा भनेको के हो?’
‘के?’ प्रश्न सुनेर एक प्रभावशाली सामाजिक टिप्पणीकार पिटर योर्कले भने, ‘के यो साँच्चैकै प्रश्न हो? यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ भने त्यो त अचम्मको कुरा हो।’
आफूलाई सच्चा बेलायतीका रूपमा व्याख्या गर्ने पिटरले नागरिकता परीक्षामा सोधिने यस्ता प्रश्न सुनेर भने, ‘यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भने मलाई आफू बेलायती नागरिक रहन्छु भन्ने लाग्दैन।’
यसको जवाफ के हो त? भिन्डोलान्दा भनेको उत्तरी बेलायतस्थित रोमन किल्ला हो।
उनै पिटर योर्कलाई अर्को प्रश्न पनि सोधियो– ‘सन् १२८४ मा रुड्लानको मूर्ति स्थापना गरिनुको आधार के हो?’
उनले यसको पनि सही जवाफ दिन सकेनन्। यसको जवाफ हो, वेल्स बेलायतमा गाभिनु।
उता २६ वर्षीय गेमा पेजले बेलायती पहिचान चिया, माछा र चिप्ससँग जोडिने बताइन्। ‘बेलायतका मौलिक विशेषता आत्मसात् गर्नु नै साँचो अर्थमा बेलायती हुनु हो। यसका बारेमा कुन कुरा कति थाहा छ वा थाहा छैन भन्नेले कुनै अर्थ राख्दैन,’ उनले भनिन्।
बेलायतको नागरिकता परीक्षा कति कठिन छ भन्ने सन् २०१४ को सर्वेक्षण नतिजाले छर्लंग पार्छ।
त्यतिबेला नागरिकता परीक्षा दिएका १८ देखि २४ वर्ष उमेरका आधाभन्दा बढी र २५ देखि ३९ वर्ष उमेरका एकतिहाइ परीक्षार्थी फेल भएका थिए। केही परीक्षार्थीले हवाई बेलायतमा पर्ने जवाफ दिएका थिए भने राष्ट्रिय बिमा भनेको सुपरमार्केट होम डेलिभरीमा प्रयोग हुने बताएका थिए।
सबभन्दा रोचक त, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालमा पढेकाले पनि बेलायतका बारेमा सोधिएका प्रश्नको सही जवाफ दिन सकेका थिएनन्। सन् २०१२ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले समेत आफूलाई ‘म्याग्ना कार्टा’ बारे कुनै जानकारी नभएको स्वीकार गरेका थिए। बेलायतको कानुन तथा राजनीतिक प्रणालीको आधारका रूपमा लिइने म्याग्ना कार्टा नागरिकता परीक्षामा सबभन्दा बढी सोधिने प्रश्न हो।
‘यो परीक्षा औचित्यहीन छ,’ लेखक माइकल ओडेलले भने, ‘यस्तो प्रश्न तयार पार्ने कर्मचारीलाई म बेलायती इतिहास र संस्कृतिको व्यवहारिक पक्षबारे अज्ञान मान्छु।’
बेलायतको इतिहासबारे सोधिने प्रश्नमा अल्पसंख्यक समुदायको सन्दर्भ र विषयलाई महत्व नदिइएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। पछिल्लो समय केही परीक्षामा भने शिख नयाँ वर्षमा मनाइने वैशाखी र इस्लाम धर्मावलम्बीको ठूलो पर्व इद–उल–फित्रबारे पनि सोधिएको थियो।
नागरिकता परीक्षा पास गर्न कम्तिमा एकतिहाइ प्रश्नको सही जवाफ दिनुपर्छ। परीक्षामा सोधिने एउटा अर्को प्रश्न पनि सर्वेक्षणमा धेरैले मिलाउन सकेका थिएनन्।
प्रश्न थियो– बेलायतमा छिमेकीहरूको झगडा हुने दुईवटा प्रमुख कारण के हुन्?
यसको सही जवाफ हो– फोहोर फाल्ने दिनबाहेक अरू बेला घरको फोहोरमैला बाहिर आँगनमा निकाल्दा वा घरको बगैंचा सफा नराख्दा।
बेलायती नागरिकता परीक्षा मात्र होइन, भिसा प्रक्रिया पनि कठिन छ। सामान्य कमाइ भएका मान्छेलाई त झन् चुनौतीपूर्ण छ।
आप्रवासनसम्बन्धी अधिवक्ता कोलिन यीओका अनुसार भिसा प्रक्रियामा करिब ९ हजार ४ सय डलर खर्च हुन्छ। पछिल्लो समय यो शुल्क अझै बढेको छ। यीओका अनुसार स्थायी बसोबासका निम्ति तिर्नुपर्ने शुल्क सन् २०१४ देखि दोब्बर भइसकेको छ।
राजकुमार ह्यारीका लागि यो रकम ठूलो कुरा नहोला। उनले आफ्नी भावी श्रीमतीका निम्ति भिसा आवेदन दिन कमाइको लेखाजोखा भने देखाउनै पर्छ। यसका निम्ति सर्वसाधारणलेझैं उनले पनि तोकिएको न्यूनतम कमाइ पूरा गर्नैपर्छ।
बेलायतको नयाँ कानुनअनुसार विदेशी मुलुकबाट आफ्नो जीवनसाथी ल्याउन भिसा आवेदन दिने मान्छेको वार्षिक न्यूनतम कमाइ १८ हजार ६ सय पाउन्ड हुनुपर्छ। आप्रवासन अनुगमन निकायका अनुसार बेलायतमा काम गर्दै आएका करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढीले यो कमाइ मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन्।
राजकुमार ह्यारी पनि सेनाबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षदेखि समाजसेवामा मात्र संलग्न छन्। उनको वार्षिक कमाइ मापदण्ड त पुग्ला, तर रोजगारमार्फत् आफ्नो कमाइ नभएकाले त्यो आय कसरी भयो भन्ने उनले खुलाउनुपर्नेछ। ह्यारी र मेगनले यो मापदण्ड पूरा गर्न नसके ६२ हजार ५ सय पाउन्डभन्दा बढी रकम बचत भएको देखाउनु पर्नेछ।
बेलायतको यो कानुनले धेरै विदेशी जोडी अलग–अलग बस्नुपरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सन् २०१२ मा यो नियम आउनुअघि ४० हजार ४ सय ६६ दम्पत्तीले भिसा पाएका थिए जुन सन् २०१६ मा २९ हजार ९० ले मात्र पाए। हजारौं जोडीका आवेदन अस्वीकार हुँदै आएको छ।
भिसालाई चाहिने आय वा बचत देखाउन ह्यारीलाई खासै कठिन नहोला। तर, बेलायतीहरूले समेत सही जवाफ दिन नसक्ने नागरिकता परीक्षाका प्रश्न मेगनको निम्ति साँच्चै कठिन हुनेछन्।
‘मेगन मार्कलले सही जवाफ दिन नसके के हुन्छ?’ ओडलले भने, ‘के राजकुमारको बिहे रोकिएला?’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४, ०१:०५:१९